Kitra – Fikaonandoham-pirenena: hofoanana sy hoesorina ny hoe tompon-baolina | NewsMada
Kitra – Fikaonandoham-pirenena: hofoanana sy hoesorina ny hoe tompon-baolina
Efa samy miandry ny fotoana hanatanterahana ilay fikaonandoham-pirenena, amin’ny baolina kitra, ny rehetra. Efa tontosa ny fakan-kevitra, nanerana ny Nosy. Mandritra ny roa andro ny handravonana izany, ho tari-dalana.
J-3 mialoha ny fikaonandoham-pirenena amin’ny baolina kitra ny rehetra. Fihaonana, hotanterahina eny Ivato, ny talata 28 sy ny alarobia 29 janoary ho avy izao. Efa vonona avokoa ny fikarakarana rehetra, izay tsiahivina fa ny tenan’ny filohan’ny federasiona malagasy (FMF), Rabekoto Raoul Arizaka, mihitsy no maniry haka ny hevitry ny besinimaro, hampandrosoana ity taranja ankamamian’ny rehetra ity.
Tanjona amin’izany ny tsy hisian’ny hoe: tompon-baolina eto an-tanana fa an’ny rehetra ny baolina kitra. Anisan’ny nanimba ny baolina kitra teto Madagasikara mantsy ny fisian’io tompon-baolina io, hatramin’izay. Hita taratra izany, na teny ambony kianja na tety ivelany.
Manomboka izao, alaina avokoa ny hetaheta sy ny hevitry ny maro. Raisina ohatra amin’izany, aorian’ny fahavitan’ny lalao iray, hisy pejy ao amin’ny tambajotran-tserasera hilazan’ny maro ny fahitany ny lalao ary hamoahany ny heviny. Avy eo, hozaraina amin’ny teknisianina sy ny mpitantana izany.
Efa tontosa ny fakan-kevitra tany amin’ireo faritra 22. Hiakatra eto Antananarivo ireo olona notsongaina sy efa notendren’ny tany amin’ny faritra hiatrika ny fikaonandoha izay hahatratra 250. Ho hita ao avokoa ireo mpiantsehatra rehetra, toy ny mpanazatra, ny mpitantana, ny mpitsabo, ny mpijery, ny mpanao gazety, ny mpilalao fahiny, ny olon-tsotra ary ny olom-panjakana, sy ny sisa.
Hisy komisiona valo handinika sy hijery ireo fanehoan-kevitra rehetra, avy amin’ny mpizaika, mandritra io roa andro io, izay haravona ka hiaingan’ny mpitantana ny baolina kitra malagasy ho fampandrosoana ity taranja efa manomboka miroborobo sy salama ity eto Madagasikara.